कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा कि सनसिटीको भाइरसै मृत? – Health Post Nepal
२०७७ असार १९ गते | Friday, 03 Jul, 2020
कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा कि सनसिटीको भाइरसै मृत?
२०७७ वैशाख ३ गते १३:१३
सनसिटीमा २८६ जनाको र्‍यापिड परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी महिलाको १२ दिने शिशु आइसोलेसनमा
सनसिटी अपार्टमेन्टका दुईजनामा कोरोना पोजेटिभ, राति ११ बजे नै आएको थियो रिपोर्ट
जोखिम समूहमा कोरोना जाँच : तीन महिला स्वयंसेविकासहित ३१ को आरडिटी पोजेटिभ
गत चैत ४ मा कतार एयरवेजको उडान नम्बर ६४४ मार्फत् दोहा हुँदै बेलायतबाट नेपाल फर्किएका एकै परिवारका दुईजनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजेटिभ भेटियो । कुनै लक्षण नदेखिए पनि वैशाख १ गते समुदायमा गरिएको र्‍यापिड डाइग्नोसिस टेस्ट (आरडिटी) तीनैजना र पछि पिसिआरमा दुईजनामा भाइरस पोजेटिभ भेटियो । नेपालमा समुदायबाट समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको प्रमाणित नहुँदैको अवस्थामा अर्थात् संक्रमणको एक्सपोजरबाट आएको २८ दिनपछि प्रमाणित यो केसपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सनसिटीका परिवार बेलायतबाटै संक्रमित भएर आएको थियो भने किन विश्वव्यापी रूपमा मानिएको १४ दिनसम्मको भाइरस विकास अवधि (इक्युबेसन पिरियड) मा कुनै लक्षण नै देखिएन?
दोस्रो र टड्कारो सवाल, उनीहरूमा बेलायतमा नभएर नेपालमै संक्रमण भएको थिएन भन्ने आधार के? सनसिटी घटनाले जन्माएको प्रश्नलाई बल पुग्ने प्रकृतिको संक्रमण वीरगन्जबाट फर्किएकी भनिएकी कैलाली लम्कीचुहाकी ६५ वर्षे महिलाको पनि हो । वीरगन्जमा चियापसल सञ्चालन गर्दै आएकी भनिएकी ती महिलामा सरेको संक्रमण विदेशबाटै आएको मान्छेबाट सरेको वा उनीबाट अन्यमा सरेको छैन भनेर भन्ने आधार के?
कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा निरन्तर छलफल र बहसमा सरिक हुँदै आएका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको सनसिटी अपार्टमेन्टको घटनाले थुप्रै सन्देह पैदा गरेको बताए ।
‘उतैबाट संक्रमण भएर फर्किएका थिए भने विश्वव्यापी मान्यता रहेको अवधिमा लक्षण र भाइरस पोजेटिभ ढिला देखिनुले केही प्रश्न जन्माएको छ,’ उने थपे, ‘उनीहरू १४ दिनको क्वारेन्टिन सकियो भनेर समुदायमा हिँड्न थालेपछि यतै पो संक्रमण भएको हो कि भन्ने कोणबाट पनि सोच्न पर्छ कि!’
थापाले संक्रमित परिवारले १४ दिनको क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरेपछि बीचमा हिँडेको भन्ने कुरा आएको भन्दै यसबीचमा उनीहरू गएका ठाउँ र भेटेका मान्छेको पनि ट्रेसिङ गर्नुपर्ने बताए ।
‘विदेशबाट आएको भन्ने बित्तिकै उतै सरेको होला भनेर स्वाभाविक सोच राखेर घटनालाई बेवास्ता गर्दा नसोचेको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सावधान हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनीहरूले भेटेको मान्छेको पनि विस्तृत सम्पर्क हेरेर पनि परीक्षण गर्नुपर्ने थापाले बताए ।
विश्वव्यापी महामारी घोषित कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा हाम्रो संक्रमण अवस्थाको विश्लेषण गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसको प्राविधिक अवस्था निर्धारण गर्छ । विदेशबाट फर्किएका एक युवाबाट उनकी भाउजुमा सरेको भन्दै चैत २२ गते नेपालमा कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेशको घोषणा गरेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनै विदेशमा पनि नगएको वा विदेशबाट आएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि नगएको मान्छेबाट सरेको अवस्थालाई संक्रमणको तेस्रो चरण भन्ने गर्छ ।
कोरियामा निको भई घर फर्किएका बिरामीमा भाइरस रिएक्टिभेसन भएर आउने प्रवृत्ति पहिचान गरिएको थियो। सनसिटीमा बस्ने परिवारका हकमा बेलायतमै रहँदा खासै गम्भीर लक्षण नदेखिइकनै रुघाखोकी देखिएर भाइरस आफैं निको भएको र अहिले रिएक्टिभेसन भएको हुनसक्छ ।
सामान्य अवस्थामा पनि विज्ञहरू उच्च संक्रामक कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरणको प्रवेश रोक्न कठिन हुने बताउँछन् । सरुवा रोगमा अनुसन्धान गरिरहेका टेकु अस्पतालका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि पेप्सिकोलाका संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री र संक्रमण पुष्टि भएको समय अवधि हेर्दा ‘रिथिंक’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
उनी यो केसमा तीन सम्भावना देख्छन् :
पहिलो, उनीहरू बेलायतमै हुँदा संक्रमण भई निको भएर पनि अहिले कोरियामा देखिएजस्तै शरीरमा भाइरसको रिएक्टिभेसन भएको ।
दोस्रो, भाइरसको धेरै कुरा अनुसन्धान हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालमा देखिएको भाइरस म्युटेड भएको फरक टाइप वा इन्क्युबेसन पिरियड अन्यत्रभन्दा भिन्न भएको ।
र तेस्रो, उताबाट केही नभएरै आएको भए पनि यतै आएपछि पो संक्रमण भएको हो कि ?
पहिलो आशंकाका सन्दर्भमा कुरा गरौं ।
कोरियामा निको भई घर फर्किएका बिरामीमा भाइरस रिएक्टिभेसन भएर आउने प्रवृत्ति पहिचान गरिएको थियो । सनसिटीमा बस्ने परिवारका हकमा बेलायतमै रहँदा खासै गम्भीर लक्षण नदेखिइकनै रुघाखोकी देखिएर भाइरस आफै निको भएको र अहिले रिएक्टिभेसन भएको हुनसक्छ ।
‘बेलायतमै संक्रमण थियो र अहिले रिएक्टिभेट मात्रै भएको हो र सो परिवार पूर्ण क्वारेन्टिमा थियो भने त्यसले हाम्रो अवस्थामा खासै फरक पार्दैन,’ डा. पुन भन्छन्।
दोस्रो आशंकाका सन्दर्भमा पनि आसाका किरण छन् । अर्थात्, नेपालमा पहिलो संक्रमित (उहानबाटै फर्केका) बाहेक कुनै संक्रमित कडा खालका लक्षण लिएर आएकाभन्दा पनि संयन्त्रले खोजेर जाँच्दा पहिचान भएका हुन् । ६० उमेर कटेका संक्रमितमा पनि अहिलेसम्म जटिलता देखिएको छैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाका सन्दर्भमा विभिन्न अनुसन्धान बाहिर आइरहेका छन् ।
कतिपय अनुसन्धानले अहिले भाइरसका म्युटेसन भइरहेको र आठ प्रकारका कोरोना भाइरस रहेको भन्ने पनि देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ सफ्ट वा कम प्रभावशाली भाइरस पनि आएको हुनसक्छ । र, त्यसको लक्षण देखिन सक्ने अवधि बढिरहेकाले २८ दिनपछि पनि पोजेटिभ देखिने अवस्था आएको हुनसक्छ ।
यदि उक्त परिवार नेपालमै संक्रमित भएको रहेछ भने पनि हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं कि भन्ने सम्भावना रह्यो । अर्को, यदि उनीहरू बेलायतमै संक्रमित भएर आएका थिए र नेपाल फर्किएको २८ दिनसम्म लक्षण देखिएन भने कतै हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड फरक भएको र यो आधारमा हामीले क्वारेन्टाइनका लागि अपनाउँदै आएको रणनीति नै गलत प्रमाणित हुने दिन त आउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यसअघि चीनको एउटा अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार भाइरस दुई प्रकारको मात्रै थियो । टाइप एस र टाइप एल । यद्यपि, यो अध्ययन नतिजालाई विश्वले पत्याइहालेको छैन । एल टाइप तीव्र फैलिने र कडा, टाइप एस तुलनात्मक रूपमा सफ्ट हुन्छ भनिएको थियो । तर, अहिले नेपालमा देखिएका कुनै पनि संक्रमितमा जटिलता नदेखिनुले सकारात्मक नतिजामा पुर्‍याउन सक्छ । त्यो आधारमा समुदायभित्रै भाइरस फैलिसकेको रहेछ भने पनि त्यसले ठूलो असर नपारेको हो कि भन्ने आसा गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
तेस्रो संभावना अलि बढी कठिन र अनपेक्षित हुनसक्छ । संसारभर संक्रमितमा लक्षण देखापर्ने अवधि अधिकतम १४ दिन मानेर हामीले क्वारेन्टाइन पनि त्यही अवधिसम्मका लागि मात्रै लगाई घर पठाइरहेका छौं । यदि उक्त परिवार नेपालमै संक्रमित भएको रहेछ भने पनि हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं कि भन्ने सम्भावना रह्यो ।
अर्को, यदि उनीहरू बेलायतमै संक्रमित भएर आएका थिए र नेपाल फर्किएको २८ दिनसम्म लक्षण देखिएन भने कतै हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड फरक भएको र यो आधारमा हामीले क्वारेन्टाइनका लागि अपनाउँदै आएको रणनीति नै गलत प्रमाणित हुने दिन त आउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । जसले कुनै पनि समयमा नेपालमा संक्रमणका केस ह्वात्तै देखिने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्नँ ।
सनसिटी संक्रमणका सन्दर्भमा आशंकासँगै केही आँकलन पनि अगाडि आएका छन् । र्‍यापिड टेस्टमा तीनजनाकै पोजेटिभ आउनु र पिसिआर परीक्षणमा दुईजनाको मात्रै भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । यसको अर्थ पिसिआरमा पोजेटिभ नदेखिएकी बुहारीलाई बेलायतमै संक्रमण भएको, छोरा र आमालाई नेपाल आएपछि अर्थात् पछिल्ला हप्तामा संक्रमण भएको हुनसक्छ ।
जसले गर्दा छोरा र आमामा भाइरस एक्टिभ भएको र बुहारीमा निको भइसकेकाले पिसिआरमा नेगेटिभमा आएको हुनसक्ने आँकलन छ । संक्रमित परिवारका सन्दर्भमा परिवारबाट आएका र अपार्टमेन्टवासीबाट आएका फरक भनाइले पनि यसमा थप र विस्तृत अनुसन्धान खोज्छ ।
‘हामीसँग कल्चर गर्ने क्षमता नै छैन,’ उनले थपे, ‘सनसिटीका मानिसमा पोजेटिभ देखिए पनि भाइरस मृत हो। उनीहरूले कसैलाई सार्न सक्दैनन् र सारेका पनि छैनन्।’
डा. पुनः अहिलेको सन्दर्भमा परीक्षण वृद्धिसँगै लकडाउन र क्वारेन्टाइनमा कडाइसँग यस्ता विशेष रूपमा देखिएका केसमा सम्भावित र आशंका उब्जिएका सबै कोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘कतिपय अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुभव र निर्देशनलाई मात्रै नकुरीकन हामीले केही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ डा. पुनले भने, ‘कम्तिमा अहिले सन्देहको घेरामा रहेको परिवारसँग सोधपुछ गरेर सबै कन्ट्याक्टको राम्रोसँग ट्रेसिङबाहेक इन्क्युबेसन पिरियड अल्लि बढी हो भन्ने मानेर क्वारेन्टाइनको अवधि बढाउने विकल्प उचित हुनसक्छ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले कोरोना नेपालमा दोस्रो चरणमै रहेको बताए । उनले परीक्षण पद्धतिमा रहेको समस्या र बुझाइको कमीका कारण मात्रै यस्तो समस्या आएको बताए ।
भाइरोलोजिस्टसमेत रहेका डा. पाण्डेले नेपालमा भएको पिसिआरले भाइरल जीवित वा मृत छुट्ट्याउन नसक्ने भएकाले सनसिटीका परिवारमा रोग निको भइसके पनि पोजेटिभ देखिएको बताए ।
उनले सुरुमा देखिएका बिरामीमा अहिले कुनै लक्षण वा समस्या नदेखिँदा पनि अस्पताल राखिराख्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि त्यसकै उपज भएको दाबी गरे । शरीरमा भाइरस मृत वा जीवित छुट्ट्याउन त्यसको कल्चर गनुपर्छ ।
यसअघि डेंगी परीक्षणमा पनि यस्तै समस्या आएको र पछि कल्चर गरेर समाधान गरिएको दृष्टान्तसमेत उनले पेस गरे ।
Tags: -यापिड टेष्ट, आरडिटी, कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९), सनसिटी अपार्टमेन्ट
2 thoughts on “कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा कि सनसिटीको भाइरसै मृत?”
याद रहोस् यो भाइरस १४ दिनको अवधिमै देखिन्छ भन्ने भ्रममा नअल्झिनु, चीनमा देखिए अनुसार व्यक्ति पिच्छे यो इन्कुवेसन पिरियड फरक हुनसक्छ अर्थात १४ देखि ३० दिन अथवा अझ बढि।
यदि त्यस् सन् सिटि आवासिय क्षेत्रमा सङ्क्रमित व्यक्ति विगत २८ दिनदेखि बिना सेल्फ क्वारेन्टाइन घुमिरहेको र विभिन्न व्यक्तिहरु संग भेटघाट गरिरहेको हो भने त्यस् आ. क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै, ती सङ्क्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरु र उनीहरू संग सम्पर्कमा आएका सबैलाई १४ देखि ३० दिन पुरै निगरानीमा राख्ने र उनीहरूको आगामी दिनमा देखिने स्वास्थ्य स्थिति अनुसार उपचार आदि गर्ने।
तर अझ महत्त्वपूर्ण त त्यहाँका हरेक अपार्टमेन्टका व्यक्तिहरुलाई आ-आफ्नै अपार्टमेन्ट बाट १४-३० दिन सम्म बाहिर निस्कन नपाउने र नपर्ने गरि क्वारेन्टाइन गराउने। उनीहरूलाई आवश्यक पर्न सक्ने खाद्य वस्तु आदि ढोका-ढोकामै पुर्‍याउने र त्यहाँका विध्युतिय लिफ्टहरु , करिडोरहरु, लगायत पूर्ण लकडाउन नहुदा सम्म मानिसको आवत जावत भएको र हुने सारा स्थानहरुमा PPE लगाएका कर्मचारीलाई प्रयोग गरि हरेक दिन ४ पटक(८ घन्टा *४ पटक) डिस्इन्फेक्टेन्ट छर्किने। यदि यसो नगरे त्यो भाइरस त्यहाँ बाट बाहिर निस्कन र अझ बढी फैलन सक्छ। यो कुनै हलुका विषय होइन, गम्भीरता पुर्वक यी विधि नअपनाइए भोलि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गई अकल्पनीय र प्रलयंकारी हुनसक्छ।
हाल: Xian city, Shaanxi province, China
LeaveaReply to आशिष Cancel reply
ह्याम्समा मृत्यु भएका वृद्धमा अस्पतालबाटै कोरोना सरेको आशंका
बझाङमा कोरोना संक्रमित युवकले गरे आत्महत्या
झापामा एकै दिन २८ कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालमा ४० प्रतिशतले जिते कोरोना
नयाँ बानेश्वर बस्ने एक व्यक्तिको कोरोनाबाट मृत्यु
एकैदिन थपिए ७४० कोरोना, संक्रमित संख्या १५ हजार २५९
सुदूरपश्चिममा एकै दिन थपिए ४ सय ८९ संक्रमित
अनशनकारी युवा भेट्न ह्याम्स अस्पताल पुगे पूर्व युवराज पारस
पर्साका पत्रकारलाई स्वास्थ्यसामग्री प्रदान